आगमी बजेटः एकल महिला र अपांग भत्ता खारेज, सांसद विकास कोष जिवित ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/आगमी बजेटः एकल महिला र अपांग भत्ता खारेज, सांसद विकास कोष जिवित !
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र धरापमा परेपछि सरकारले एकल महिला र अपांग भएका ब्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गरेको छ । तर चरम भ्रष्टाचार र कानुनसँग बाँझिने सांसद विकास कोष भने आगमी बजेटमा यथावत रहने भएको छ ।
लकडाउनमा चो’री गर्ने ११ जना पक्राउ